9 Teacup Maltese အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အနည်းငယ်သာသိရှိထားသောအချက်အလက်များ - Breeds
9 Teacup Maltese အကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အနည်းငယ်သာသိရှိထားသောအချက်အလက်များ
Teacup Maltese စကားလုံးသည်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေသည့်အတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သေးငယ်သည့် Maltese ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ ၄ တိတိဖြစ်သည်။
ဤကလေးငယ်များသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းလူကြိုက်များလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသည်ကိုနားလည်ရန်ခဲယဉ်းသည်။
TO သို့ fluffy အဖြူခွေးအလွန်သေးငယ်သော ,
သင်၏ Teacup Maltese ခွေးသို့သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်ကိုးချက်ရှိသည်။
၁။ Teacup Maltese လေးရုံလေးသည်
2. အရစ္စတိုတယ်ဟာ Maltese ခွေးဆွေမျိုးတွေအကြောင်းရေးခဲ့တယ်
3. မော်လ်တာ၏ရှေးဟောင်း Dogge
၄။ Teacup Maltese သည်တော် ၀ င်ဖြစ်သည်
၅။ Teacup Maltese တွင်ကြီးမားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည်
၆။ အဖြူရောင်သည် Teacup Maltese အတွက်တစ်ခုတည်းသောအရောင်ဖြစ်သည်
၇။ Teacup Maltese ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဒေါ်လာကုန်ကျနိုင်သည်
၉။ Teacup Maltese Dogs သည် Hypoglycaemia ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်
ဒီခွေးဟာသေးငယ်တဲ့ Maltese စကားလုံးရဲ့သေးငယ်တဲ့ version ပဲ။
American Kennel Club မှ၎င်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းအား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သားပေါက်အဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါ။ ၎င်းသည်တရားဝင်ခွေးငယ်လေးအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်သင်၏ Teacup Maltese သည် Kennel Club တွင် Maltese ခွေးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သင်ခွက်အရွယ် pooch သည်အလွန်သေးငယ်သောကြောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည် အဆိုပါဖောက်စံသည် ။
ဤသေးငယ်သောခွေးများသည်လေးပေါင်သာလေးပြီး ၈ ပေါင်အလေးချိန်ရှိသော၎င်းတို့၏အရွယ်အစားရှိသောမောင်နှမများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက
ဤခွေး၏ Teacup မူကွဲကိုမျိုးဆက်များကဤလုပ်ရန်ကြိုးစားစဉ် ၁၇ နှင့် ၁၈ ရာစုတွင်အမှန်တကယ်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် သေးငယ်တဲ့ခွေးသေးငယ်တဲ့ ။
ဒါလုပ်ခဲ့တယ် သေးသေးလေး Poodles ကိုဖြတ်ကူး နှင့် Spaniels လိုင်းသို့။
တကယ်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူမျိုးပေါင်း ၈ မျိုးလောက်ကိုခွေးအမျိုးအစားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်။
သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ, ဖောက်မွေးစံကို 1964 ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးနှင့်အပြီးသတ်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်မှစ။ မပြောင်းလဲပါ။
အတိအကျ Maltese ခွေး၏မူလအစ သူ့ဟာသူမသိနိုင်ပါဘူး။
၎င်းသည်ဆွစ် Spitz အမျိုးအစားခွေးများမှဆင်းသက်လာသည်ဟုယူဆရသည် တိဘက် Terrier ၏ဆွေမျိုး ။
အတိတ်ကာလ၌, Maltese ကိုတစ်အဖြစ်ခွဲခြားထားသည် Bichon မိသားစုဝင် နှစ်ခုအမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားမှုသီးခြားဖြစ်သောကြောင့်, သို့သော်, ဒီမမှန်ကန်ပါ။
မူလကမော်လတာနိုင်ငံမှမွေးဖွားခဲ့ပြီးထိုခွေးများသည်ရှေးဂရိလူ့အဖွဲ့အစည်းများအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဂရိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်အရစ္စတိုတယ် “ Melitaei Catelli” ကို Teacup Maltese ခွေး၏အစောပိုင်းဆွေမျိုးအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သူများတွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဘီစီ ၃၇၀ အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
ရောမကဗျာဆရာများသည်အချို့သောသမိုင်းပညာရှင်များကရှေး ဦး မော်လ်ဒိုက်အမျိုးအစားခွေးဟုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော“ အဖြူရောင်ခွေးကောင်လေး” အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၁၀ စုအတွင်း Teacup Maltese ကိုလူသိများခဲ့သည် အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမည်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် - Rover (သို့) Fido သက်သက်မျှမဟုတ်ပါ။
ထိုဖောက်ခွဲမှုသည်မော်လတာနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးရောက်ရှိလာကတည်းကသူတို့ကိုနာမည်များစွာဖြင့်လူသိများခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည် - သို့သော်
ဤရှည်လျားသောအမည်များစာရင်းသည်သူတို့၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းမှဖြစ်သည် အဖော်တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ် ။
စာရင်းထဲကသင်မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒီနာမည်တွေအားလုံးမှာတူညီတာတစ်ခုရှိတယ်။ Maltese ခွေးသည်အလွန်လူကြိုက်များသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်း၏အဖော်များ၊ နွေးထွေးမှုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖော်ရွေသောသဘောသဘာဝတို့ကြောင့်လူသိများသည်။
စကော့လူမျိုးမိဖုရားဘုရင်မနှင့်မိဖုရား Elizabeth လိရှဗက် ၁ တို့နှင့်အတူမာလတီဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်မူပိုင်၏သက်တမ်းအတွင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည် တ ဦး တည်းပိုင်ဆိုင်တော်မူပြီးမှ ။
တော် ၀ င်မင်းသမီးနန်းတော်များ၌အမွေအနှစ်များကြောင့် Maltese သည်အကောင်းဆုံးကိုအကောင်းဆုံးစားသုံးခြင်းကြောင့်အကျိုးဆက်မှာအလွန်ဇီဇာကြောင်သောစားသုံးသူများဖြစ်သည်။
သူတို့ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 20% ပရိုတိန်းတစ်အစားအစာလိုအပ်သည်။ သို့သော်အရည်အသွေးသည်အရည်အသွေးထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးနိမ့်သောပရိုတင်းများစွာထက်အရည်အသွေးမြင့်သောအရင်းအမြစ်ငယ်များကိုအစာကျွေးခြင်းသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းသည်။
သင့်ခွေး၏အင်္ကျီကိုတောက်ပနေစေရန်ကူညီရန်အဆီနှင့်အဆီများသည် ၅% -10% ဖြစ်သင့်သည်။
ဆီသို့သူတို့ရဲ့ propensity ကြောင့် အနိမ့်သွေးသကြားဖွံ့ဖြိုးဆဲ ဤခွေးများကိုမကြာခဏကျွေးရန်အရေးကြီးသည်။
ဤသည်အများဆုံးဖွယ်ရှိကနေအဓိကအားထား တစ် ဦး ရင်ခွင်ခွေးအဖြစ်၎င်းတို့၏ဇစ်မြစ် , သူတို့ရဲ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝအထုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လာပါတယ်။
လူသစ်၊ နေရာများနှင့်အရာများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသင့်သည် သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်မှာ နှင့်များသောအားဖြင့် Teacup Maltese သည်အရာရာကိုအောင်မြင်စွာကိုင်တွယ်လိမ့်မည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, teacup ခွေးနာမည်ဆိုးဖြစ်ကြသည် အိမ်မှုကိစ္စပြောဆိုရန်ခက်ခဲသည် သူတို့ရဲ့အလွန်သေးငယ်သောဆီးအိမ်ကြောင့်။ ဤသည်ကိုအပြုသဘောအားဖြည့်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းအများကြီးနှင့်အတူတညျ့နိုင်ပါတယ်။
Teacup Maltese သည်ချစ်စရာကောင်းသောအဖြူရောင်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်အများအားဖြင့် ၈ လက်မခန့်ရှိပြီးပျမ်းမျှအလေးချိန်မှာ ၄ ပေါင်မှ ၅ ပေါင်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများသည်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်မှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အရ အဆိုပါဖောက်စံရန် အဖြူသည်ဤခွေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောလက်ခံနိုင်သောအရောင်ဖြစ်သည်။ အခြားအရောင်များ (bi နှင့်သုံးရောင်စုံခွေးများအပါအဝင်) သည် ၁၉၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ လက်မခံနိုင်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။
သူတို့ပတ်ပတ်လည်ရှိမျက်နှာများ၊ အနက်ရောင်နှာခေါင်းများနှင့်အနက်ရောင်မျက်လုံးများအားဖြင့်အလွယ်တကူခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ နေရောင်အလုံအလောက်မရရှိလျှင်သို့မဟုတ်ရာသီသို့လာသည့်ခွေးဖြစ်လျှင်သူတို့၏အနက်ရောင်နှာခေါင်းများသည်ပန်းရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။
ဒီခွေးကို hypoallergenic လို့လည်းသတ်မှတ်ထားပြီးဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့်ဒီကစားစရာခွေးဟာဘာဖြစ်သွားလဲ puppy cut ဟုလူသိများသည် , ကုတ်အင်္ကျီတိုသည်အဘယ်မှာရှိ - တစ်လက်မထက်လျော့နည်း။
ဒီခွေးကိုမွေးမြူဖို့ဆိုရင်မင်းတို့ဟာအလွန်သေးငယ်သော Maltese ခွေးနှစ်ခုကိုအတူတကွမွေးဖွားပေးရမယ်
ပုံမှန်အရွယ်အစားရှိသော Maltese ခွေးများသည်ခွေးပေါက်စသုံးကောင်ကိုသာဘေးကင်းစွာမွေးဖွားနိုင်သဖြင့်များသောအားဖြင့်အမှိုက်သရိုက်တစ်ခုစီအတွက်ခွေးတစ်ကောင်သို့မဟုတ်နှစ်ကောင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
သို့သော်ခွေးတစ်ကောင်ပင်လျှင်မိခင်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်တင်းကြပ်စေသည် ကဲသာဆွားခွဲစိတ်ကုသမှုမှတဆင့်မွေးဖွားသည် ။
ဤအပိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုများများအရ Teacup Maltese ခွေးပေါက်စများသည်ဒေါ်လာ ၇၅၀ မှ ၂၀၀၀ ဒေါ်လာကြားရှိသည်။
စျေးကြီးတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့သူတို့ရဲ့လူကြိုက်များမှုကြောင့်ဒီအပင်ကို 'အိမ်နောက်ဖေးပိုင်ရှင်များ' နဲ့ခွေးကလေးစက်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ ဤလူအမျိုးမျိုးသည်ခွေးများကိုခွေးစားခြင်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဂရုစိုက်တတ်ရန်လေ့ရှိသည်။
ရှောင်ကြဉ်ခြင်း မျိုးဆက်များဤအမျိုးအစားများ သင်ဘာရှာရမည်ကိုသိလျှင်လွယ်ကူသည်
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ခွေးများကို CraigsList သို့မဟုတ် GumTree ကဲ့သို့သောနေရာများတွင်ဘယ်တော့မှမကြော်ငြာပါ
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်မွေးမြူခြင်းမပြုမီလိုအပ်သောကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကို sire နှင့် dam ပေါ်တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်
ကောင်းမွန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်သင်၏ခွေးကလေးကိုသူတို့၏အမေနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ရခြင်းအတွက်သင်ပိုမိုပျော်ရွှင်လိမ့်မည်
သားမွေးခြင်းကြောင့်ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းတွေ့မြင်နိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်းမျိုးကောင်းမျိုးပွားသူတစ် ဦး ကသင့်အားသူ၏ကျန်းမာရေးနှင့်စိတ်နေသဘောထားများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ရန်သင်ပိုမိုပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
အဖြစ်ပျြောနှင့် ဤခွေးကဲ့သို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကလေးငယ်များအားလုံးကစားခြင်းကိုကြီးကြပ်ရန်အရေးကြီးသည်။
အသုံးအများဆုံးတစ်ခုမှာ hypoglycaemia (ဆိုလိုသည်မှာ) သကြားဓာတ်နည်းသည် ) - ဂရုတစိုက်မစောင့်ကြည့်လျှင်၎င်းသည်ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်သေစေနိုင်သည်။
Maltese ခွေးများသည်အသည်း၊ နှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများလည်းဖြစ်နိုင်သည် ၎င်း၏သေးငယ်ဒီဇိုင်နာအရွယ်အစားကြောင့် ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့် Teacup Maltese သည် ၁၂ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အကြားနေထိုင်သည်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း Teacup Maltese သည်လက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်လုံးရှိချစ်စရာကလေးမျှသာမဟုတ်ပါ။
နာမည်ကြီးဇီဇာကြောင်ပေမယ့်သူတို့ကတစ် ဦး ဖြစ်ကြသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်သစ္စာစောင့်သိအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ။
သူတို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်တဲ့အစားအစာတွေလိုအပ်တယ်၊ အကောင်းဆုံးကိုသာစားတယ်၊ သူတို့ရဲ့လှပတဲ့အင်္ကျီကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နိုးနိုးကြားကြားရှိတဲ့အလေ့အကျင့်လိုအပ်တယ်။
သင်ဤသေးငယ်သော pooch ကိုပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ တစ်လုံးကိုရယူရန်မျှော်လင့်သည်ဖြစ်စေ၊ ဖြတ်သန်းသွားသည်ဖြစ်စေဤလှပသောခွေးကလေးအပေါ်သင်၏အတွေးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမှတ်ချက်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်သည်။
အဆိုပါ Cairn Terrier ခွေးမွေးမြူရေးကိုသိရန်ရယူပါ
Labradoodle သည်အကောင်းဆုံး Doodle အကြောင်းရင်း ၁၉
ချစ်စရာကောင်မလေး pitbull ခွေးကလေးနာမည်များ
jack russell terrier chihuahua ရောနှောသည်
ငွေ labrador ဆိုတာဘာလဲ